Vaginal delivery vaginal
Utrozhestan dia fanomanana hormonaly ny progesterone amin'ny orinasa. Natao tamin'ny endrika takelaka, capsules ary suppositories.
Ny vehivavy matetika dia tsy mahafantatra ny fomba hahazoana kokoa ny Utrozestan - vaginally na am-bava. Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana vagin-tany dia ny tsy fisian'ny fandokafana ny taratasy mivalona mahasalama.
Mampihena ihany koa ny mety ho voan'ny aretina azo tsapain-tanana amin'ny voina ao amin'ny Utrozhestan - fitabatabana, hafanam-po, fanehoan-kevitra tsy mahazatra. Tena marina izany amin'ny fampiasana ny rongony maharitra.
Fampahalalana momba ny fampiharana Utrozhestan vaginally
Ny haben'ny fangatahana dia malalaka. Matetika ny zava-mahadomelina dia natao ho an'ny fanitsakitsahana ny tsingerin'ny taovam-pandaminana miaraka amin'ny tsy fahampian'ny progesterone. Ny hormone dia manampy amin'ny fametrahana ny fikarakarana ny endometrium.
Ny capsules Utrozhestan koa dia ampiasaina am-pahamendrehana amin'ny olana amin'ny tsy fahaizan'ny oviana, fisorohana ny aretina hormona. Ny tena mahasoa ny zava-mahadomelina dia manampy amin'ny famahana olana ara-pananahana. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fiomanana amin'ny famokarana vitaminina na olana amin'ny tsy fahampiana.
Raha misy ny fampitahorana ny fampiasana zaza tsy ampy taona mandritra ny fitondrana vohoka dia nomena vaginaly matetika ny Utrozestan.
Inona no atao hoe vitrogene vaginally?
Ny labozia dia tokony hampidinina lalina ao amin'ny vagina. Raha toa ka sahirana ianao, dia azonao ampiasaina ilay fangatahana.
Matetika dia manendry 100 mg indroa isan'andro. Fa ny doka dia nofinidin'ny mpitsabo arakaraka ny famantarana sy ny vokatra tadiavina.
Fanandramana mikasika ny fitsaboana ny zava-mahadomelina
Aza misalasala maka vaginal suppositories na takelaka. Ny vidin'ny Utrozhestan miaraka amin'ny korontana mitroka, ny tsy fahazakana ny olona, ​​eo anatrehan'ny atidoha ny vatana na ny vatana .
Utrozhestan dia zava-mahadomelina hormona, koa ampiasao amim-pitandremana izany. Ny andraikitry ny tenany dia mety miteraka vokatra ratsy sy vokatra ratsy.
Ny dokotera irery ihany no afaka misafidy ny dosage mety, izay amin'ny farany dia hanampy amin'ny vokatra tsara.
Oadray tokana tokana
Fiberomatosis ny tranonjaza
Ny menopause aloha - antony
Azo atao ve ny manao firaisana alohan'ny fotoana?
Ny homamiadan'ny vatana amin'ny vehivavy - ny soritr'aretina
Tapakila, manitatra ny habakabaka ao anatiny
Pikantsy fanala amin'ny naila - manilika ririnina
Vehivavy eo an-dalam-pandrosoana
Antiviral ho an'ny ankizy
Sakafom-bozaka ao amin'ny jirony manokana - fomba mahazatra mahasalama momba ny fitehirizana mahafinaritra sy ny tany am-piandohana
Ny Flower «Fahasambaram-behivavy» - ny ravina dia mihodina mainty
Nahoana ny zaza no mihomehy?
Sakafo varim-bazaha ao amin'ny multivarque - sakafo tsara indrindra amin'ny sakafo na ronono
Salady miaraka amin'ny trongan'ny akoho natono - tsotsotra tsotra
Sandwich miaraka amin'ny salady mavokely
Oatmeal ho an'ny sakafo ho an'ny fatiantoka - fitsaboana
Top 10 buges amin'ny fampiakarana ankizy
Kim Kardashian dia matahotra ny horonantsarin'ny firaisana ara-nofo